ကိုယ်ချစ်တာတွေက သူ့အတွက် အနှောင့်အယှက်သက်သက်ပါ …. – Shinyoon
ကိုယ်ချစ်တာတွေက သူ့အတွက် အနှောင့်အယှက်သက်သက်ပါ ….
May 22, 2021 by Shin Yoon
သတိရလို့ ခေါ်နေမိတဲ့ဖုန်းတွေဟာ သူ့ရဲ့တစ်နေ့တာကို စိတ်ရှုပ်စေခဲ့မှန်း တကယ်သတိမထားမိခဲ့ဘူး … ကိုယ်က လွမ်းလို့ဆက်တာလေ မေ့နေတဲ့သူအတွက်ကျ ဘာအကြောင်းကြောင့်ဆက်ဆက် အရေးကြီးမနေတာက သဘာဝပါပဲ … ဘာပြောစရာရှိလို့လဲတဲ့ ဘာမှ ပြောစရာမရှိတော့လောက်အောင် သူက နေနိုင်နေပြီပဲလေ ။
စိတ်ပူလို့ မှာမိတဲ့ မှာတမ်းတွေဟာ ချုပ်ချယ်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့ လူတွေဟာ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ် သူ့ဘဝနဲ့သူပဲတဲ့ ဒါပေမယ့် သူနဲ့အတူ အချိန်တွေအကြာကြီးအတူရှိချင်တဲ့ကိုယ့်မှာ ကိုယ့်ထက် သူ့ကို ပိုပြီးပူရတယ် သူသာတစ်ခုခုဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့ စိတ်ပူမှုတွေနဲ့ ကိစ္စသေးသေးလေးတွေက အစ ဂရုစိုက်နေမိတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အမှားပါ …
ဒါပေမယ့် အချစ်ကို အချစ်လို့မှ မမြင်ပဲလေ … ကိုယ်ပေးတဲ့အချစ်တွေက ဖြူတယ်ဆိုပေမယ့်လဲ သူ့အတွက်ကျတော့ ကိုယ့်ကို ချစ်တာမှ မဟုတ်ပဲလေ … ချစ်နေပါလားလို့ဘယ်မြင်ပါ့မလဲ နေရာတကာ ပွစိလိုက်တယ် ပြသနာရှာတယ် ပြီးတော့ ရစ်တယ်ပေါ့ … ကျွန်မက သိပ်ချစ်တတ်ခဲ့တာပါ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအချစ်တွေက သူ့အတွက်ကျတော့ အနှောင့်အယှက်သက်သက်ပါပဲ …
ဒီထက်ပိုမချစ်မိအောင်နေရင်းက ဒီထက်ပိုတိုးပြီး ချစ်နေမိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ တဖြေးဖြေး မုန်းလာမိတယ် …. သူ လိုအပ်တဲ့အခါ အပြေးလေးလာတာကိုပဲ မျှော်နေမိသေးတဲ့ ကိုယ့်ဟာ သူ့အတွက် လိုတုန်းခဏသုံးတဲ့ လိုသုံးဘဝပါ … ချစ်တာတွေ မေတ္တာတွေ သစ္စာတွေ သူသိမနေခဲ့ဘူး … သူသိတာဆိုလို့ ကိုယ့်အချစ်တွေဟာ စိတ်ရှုပ်စရာဆိုတာပါပဲ …
ကိုယ္ခ်စ္တာေတြက သူ့အတြက္ အေနွာင့္အယွက္သက္သက္ပါ ….
သတိရလုိ့ ေခၚေနမိတဲ့ဖုန္းေတြဟာ သူ့ရဲ႔တစ္ေန့တာကို စိတ္ရႈပ္ေစခဲ့မွန္း တကယ္သတိမထားမိခဲ့ဘူး … ကိုယ္က လြမ္းလို့ဆက္တာေလ ေမ့ေနတဲ့သူအတြက္က် ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ဆက္ဆက္ အေရးၾကီးမေနတာက သဘာ၀ပါပဲ … ဘာေျပာစရာရွိလုိ့လဲတဲ့ ဘာမွ ေျပာစရာမရွိေတာ့ေလာက္ေအာင္ သူက ေနနိုင္ေနျပီပဲေလ ။
စိတ္ပူလို့ မွာမိတဲ့ မွာတမ္းေတြဟာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တယ္လို့ျမင္တယ္ေပါ့ လူေတြဟာ ကိုယ့္ဘ၀နဲ႔ကိုယ္ သူ့ဘ၀နဲ႔သူပဲတဲ့ ဒါေပမယ့္ သူနဲဲ႔အတူ အခ်ိန္ေတြအၾကာၾကီးအတူရွိခ်င္တဲ့ကိုယ့္မွာ ကိုယ့္ထက္ သူ့ကို ပိုျပီးပူရတယ္ သူသာတစ္ခုခုျဖစ္ရင္ဆုိတဲ့ စိတ္ပူမႈေတြနဲ႔ ကိစၥေသးေသးေလးေတြက အစ ဂရုစိုက္ေနမိတာဟာ ကိုယ့္ရဲ႔ အမွားပါ …
ဒါေပမယ့္ အခ်စ္ကို အခ်စ္လုိ့မွ မျမင္ပဲေလ … ကိုယ္ေပးတဲ့အခ်စ္ေတြက ျဖဴတယ္ဆုိေပမယ့္လဲ သူ့အတြက္က်ေတာ့ ကိုယ့္ကို ခ်စ္တာမွ မဟုတ္ပဲေလ … ခ်စ္ေနပါလားလို ့ဘယ္ျမင္ပါ့မလဲ ေနရာတကာ ပြစိလိုက္တယ္ ျပသနာရွာတယ္ ျပီးေတာ့ ရစ္တယ္ေပါ့ … ကြ်န္္မက သိပ္ခ်စ္တတ္ခဲ့တာပါ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီအခ်စ္ေတြက သူ့အတြက္က်ေတာ့ အေနွာင့္အယွက္သက္သက္ပါပဲ …
ဒီထက္ပုိမခ်စ္မိေအာင္ေနရင္းက ဒီထက္ပိုတိုးျပီး ခ်စ္ေနမိတဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလဲ တေျဖးေျဖး မုန္းလာမိတယ္ …. သူ လုိအပ္တဲ့အခါ အေျပးေလးလာတာကိုပဲ ေမွ်ာ္ေနမိေသးတဲ့ ကိုယ့္ဟာ သူ့အတြက္ လိုတုန္းခဏသံုးတဲ့ လုိသံုးဘ၀ပါ … ခ်စ္တာေတြ ေမတၱာေတြ သစၥာေတြ သူသိမေနခဲ့ဘူး … သူသိတာဆိုလို့ ကိုယ့္အခ်စ္ေတြဟာ စိတ္ရႈပ္စရာဆုိတာပါပဲ …
အတိတ်ကို ပြန်မသွားချင်တော့ပါဘူး …
လွယ်လွယ်လေး ချစ်ခဲ့တာ မဟုတ်တော့ လွယ်လွယ်လေး မေ့ဖို့ခက်တယ် ….